China Gas-mmiri mmiri booster mmanụ cylinder emepụta na suppliers | Vishi
1. Piston ụdị
Otu piston rod hydraulic cylinder nwere mkpanaka piston na naanị otu njedebe.This bụ otu piston hydraulic cylinder.The ụzọ mbata A na B na nsọtụ abụọ nwere ike ịgafe mmanụ nrụgide ma ọ bụ laghachi mmanụ iji ghọta ụzọ abụọ, yabụ ọ bụ akpọ okpukpu abụọ cylinder.
Pistin nwere ike ị gagharị naanị n'otu ụzọ, a ga-emerịrị nke ọzọ na-esote site na mpụga ike.Ma ọrịa strok ya buru ibu karịa nke piston hydraulic.
Piston ụdị haịdrọlik cylinder nwere ike kere n'ime otu mmanya ụdị na abụọ mmanya ụdị nke abụọ owuwu, na ofu ụzọ site cylinder ngọngọ ofu na pistin mkpara ofu abụọ iche iche, dị ka ihe nke mmiri mmiri nsogbu nwere otu ihe ụdị na abụọ edinam ụdị. N'ime otu na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ, a na-enye mmanụ mgbali na oghere nke haịdrọlik na-arụ ọrụ, a na-ahụkwa cylinder ahụ na-agagharị otu ụzọ site na nrụgide mmiri, ebe ikike mpụga na-ahụ site na mpụga ike (dịka ike mmiri, ibu nwụrụ anwụ ma ọ bụ ibu mpụga, wdg.). Mmeghari nke piston ahụ na ụzọ abụọ nke cylinder abụọ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ site na nrụgide mmiri site na ntinye mmanụ ọzọ nke Chamlọ abụọ.
2. ungdị plunger
(1) pldị pịọdlịlịlịlum ahụ bụ otu na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ hydraulic, nrụgide hydraulic nwere ike nweta naanị ụzọ ngagharị, njem nloghachi nke plunger dabere na mpụga ndị ọzọ ma ọ bụ ịdị arọ nke olulu ahụ;
(2) Onye na-agbanye plunger na-akwado ya naanị site na eriri silinda ma anaghị akpọtụrụ ya na eriri ahụ, yabụ na eriri ahụ dị mfe ịhazi, ya mere, ọ kwesịrị ekwesị maka ịme ogologo ogologo hydraulic cylinder;
(3) Ihe ndọtị ahụ na-enwe nrụgide mgbe ọ na-arụ ọrụ, ya mere ọ ga-enwerịrị isi ike;
(4) Ibu arọ nke olulu ahụ na-adịkarị ukwuu, mgbe etinyere ya na mbara igwe, ọ na -adị mfe ịdaba n'ihi ibu nke onwe ya, na-ebute otu ụdị nke akàrà na ntuziaka, yabụ iji ya kwụ ọtọ dịkwuo mma.
3. Telescopic ụdị
Mpempe hydraulic a na-adọta azụ nwere piston abụọ ma ọ bụ karịa, piston ahụ na cylinder hydraulic a na-atụgharị site na obere ruo obere, ọ dịghịkwa usoro a na-ewepụ azụ na-adịkarị site na obere ruo nnukwu. Ọ dị mkpụmkpụ, ihe owuwu ahụ dị obere karịa. A na-ejikarị ụdị hydraulic a na-ejikarị arụ ọrụ na-arụ ọrụ na ígwè ọrụ ugbo. Enwere ọtụtụ piston n'otu ngagharị, nke ọ bụla na-eme piston ọ bụla, a na-agbanwe ọsọ ọsọ ya na ike mmepụta ya.
Nke gara aga: Gas-mmiri mmiri booster cylinder
Osote: General mkpara cylinder